Fraịdee 5 Maachị 2021
Expandable Table Lido na-abanye n'obere igbe nwere akụkụ anọ. Mgbe apịaji ya, ọ na-arụ ọrụ dịka ebe nchekwa maka obere ihe. Ọ bụrụ na ha ebuli efere n'akụkụ aka, ihe na-ejikọ aka na nkwonkwo ụkwụ na igbe ahụ, Lido na-agbanwe gaa na tebụl tii ma ọ bụ obere tebụl. N’otu aka ahụ, ọ bụrụ na ha atọpịa efere ndị dị n’akụkụ abụọ, ọ na-agbanwe gaa na tebụl buru ibu, ebe elu nke nwere obosara nke 75 Cm. Enwere ike iji tebụl a dị ka tebụl iri nri, ọkachasị na Korea na Japan ebe ịnọdụ ala ebe nri nkịtị bụ ọdịnala.
Tọọzdee 4 Maachị 2021
Ihe Eji Egwuri Egwu Ikpoko akuko abuo nke putara imu umu ohuru, ihe ohuru n’eji egwu, uzo ohuru eji eme egwu, ihe ohuru. Ihe ọzọkwa akpịrịkpa maka ilu bụ D3, A3, Bb3, C4, D4, E4, F4, A4 na sistemụ eriri string na sistemu EADGBE. DrumString bụ ọkụ ma nwee eriri ejiri kechie ubu na ukwu yabụ iji ya ma jide ya ga-adị mfe ma ọ ga-enye gị ike iji aka abụọ.
Wenezdee 3 Maachị 2021
Okpu Ígwè Okpu okpu agha ahụ sitere na ihe owuwu 3D Voronoi nke kesara na Nature. Site na njiko nke parametric Usoro na bionics, okpu anyinya igwe nwere ihe ndi ozo na-akawanye elu. Ọ & # 039; s dị iche na usoro nchekwa nchekwa flake ọdịnala na sistemụ 3D nke ya na-enweghị eriri. Mgbe ike nke mpụga kụrụ ya, ihe owuwu a na-egosi nkwụsi ike. N'ọdịdị nke ịdị mfe na nchekwa, okpu agha na-eme ka ndị mmadụ nwee ahụ iru ala, ejiji karị, na okpu ígwè nchebe nchebe onwe onye dị nchebe.
Tiuzdee 2 Maachị 2021
Tebụl Kọfị A na-eme tebụl dị iche iche nke plywood a na-agakọta ọnụ n'okpuru nrụgide. A na-etegharị oghere ndị dị na ya ma ọ bụ nke yiri matt na varnish siri ike. Enwere ọkwa abụọ - ebe ime n'ime tebụl dị oghere - nke bara ezigbo uru maka itinye akwụkwọ ma ọ bụ oghere. N’okpuru tebụl a ka enwebe aka na wiil. Ya mere, oghere dị n'etiti ala na tebụl dị obere, mana n'otu oge ahụ, ọ dị mfe ịkwaga. Iszọ eji eji plywood eme ihe (vetikal) na-eme ka ọ sie ike.
Chaise Ezumike Echiche
Mọnde 1 Maachị 2021
Chaise Ezumike Echiche Echiche ezumike Dyhan na-ejikọta atụmatụ ọhụụ na echiche ọdịnala ndị ọdịnala na ụkpụrụ nke udo nke obi site na njikọta na okike. N'iji Lingam dị ka mmụọ mkpị na ụdị Bodhi-na ubi nke Japanese dị ka ndabere nke modul echiche, Dhyan (Sanskrit: tụgharịa uche) na-agbanwe nkà ihe ọmụma ọwụwa anyanwụ gaa na nhazi dị iche iche, na-eme ka onye ọrụ jiri aka ya họrọ zen / izu ike. Ọnọdụ ọdọ mmiri mmiri na-agba onye ọrụ gburugburu mmiri na ọdọ mmiri, ebe ọnọdụ ogige gbara onye ọrụ ahụ ihe ọkụkụ. Standardkpụrụ ọkọlọtọ nwere mpaghara nchekwa n'okpuru ikpo okwu na-arụ ọrụ dị ka ebe nchekwa.
Mbọsị Ụka 28 Febrụwarị 2021
Expandable Table Ihe Eji Egwuri Egwu Okpu Ígwè Tebụl Kọfị Chaise Ezumike Echiche Njikwa Nnweta Ihu 3D